‘रुद्रप्रिया’ खेल्दा ‘टकिला सनराइज’ बाट आर्यन आउट ! « Ramailo छ
‘रुद्रप्रिया’ खेल्दा ‘टकिला सनराइज’ बाट आर्यन आउट !
निर्देशक दिनेश राउतले निर्देशन गर्ने फिल्म ‘टकिला सनराइज’ बाट नायक आर्यन सिग्देल रिप्लेस भएकै हुन् त ? निर्देशक राउतको भनाई र फिल्म बजारमा भैरहेको चर्चालाई विश्वास गर्ने हो भने निर्देशक राउतको फिल्मबाट आर्यन आउट भएका छन् । उनको ठाउँमा अर्को नायकको खोजी भैरहेको छ ।
‘टकिला सनराइज’ मा आर्यन सिग्देल रहन्छन् त ? भन्ने प्रश्नमा निर्देशक राउतले भनेका छन्, ‘यस विषयमा केही नबोलौं । हामी केही दिनपछि हिरो सार्वजनिक गर्नेछौं ।’ नायिका भने नम्रता श्रेष्ठ नै रहने निर्देशक राउतले बताए । ‘नोभेम्वर रेन’ र ‘क्लासिक’ मा आर्यन र नम्रताको जोडी जमाएका दिनेश राउतले किन ‘टकिला सन्राइज’ मा आर्यनको विकल्पमा अन्य नायकलाई लिने सोच बनाए त ?
रेखा थापाको फिल्म ‘रुद्रप्रिया’ मा आर्यन खेलेपछि ‘टकिला सनराइज’ मा आर्यनको विकल्प खोजिएको फिल्मी वृत्तमा चर्चा छ । रेखा थापा क्याम्पबाट आर्यन निर्देशक राउत क्याम्पमा थिए । सात वर्ष पछि आर्यन रेखा फिल्मसको रुद्रप्रियामा फर्किएका हुन् । छायाँकनरत फिल्म कात्तिक २ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । अब टकिला सन्राइजमा कसले गर्ला त आर्यनलाई रिप्लेस ?